Ciidamada ammaanka oo Muqdisho ku toogtay nin hubeysnaa | Somsoon
Home WARAR Ciidamada ammaanka oo Muqdisho ku toogtay nin hubeysnaa
Ciidamada ammaanka oo Muqdisho ku toogtay nin hubeysnaa
Ciidamada ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa caawa togasho ku dilay nin ku hubeysnaa Bistoolad.
Dilka ruuxaas oo la sheegay in uu ahaa wiil dhalinyaro ah ayaa ka dhacay degmada Hodan ee gobolka Banaadir, gaar ahaan halka looyaqaano Siligga Ameerikaanka oo u dhaw daarta Sey-biyaano.
Ciidamada ayaa ka shakiyay ninkaas ku hubeysnaa bistooladda waxayna ku amreen inuu istaago, balse waxa uu isku dayay inuu ka baxsado rasaas ay ku fureen waxaana ka soo gaaray dhaawac uma uusan istaagin oo waxa uu ku dhex dhuuntay gaari Bus ah oo ay saarnaayeen dad rakaab ah.
Ciidamada ayaa uga daba tagay gaariga iyagoo oo halkaas ku dilay, waxayna ka heleen bistoolad uu ku hubaysnaa, sidoo kale gaarigii uu uga dhuuntay ayaa shil galay, walow aan lasoo sheegin khasaare ka dhashay.
Wali lama ogaan cidda uu ka tirsanyahay ruuxsaan la dilay,mana jirto cid aqoonsatay meydkiisa oo muddo yaalay halka lagu dilay oo ah kasoo horjeedka Siligga Ameerikaanka ama beerta Qaadka.
Ciidamada ammaanka magaalada Muqdisho ayaa maalmihii lasoo dhaafay toogasho ku dilay qaarna nolosha ku qabtay dhalinyaro ka tirsanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab, kuwaas oo xilliyadaas dilal ka heysanayay magaalada Muqdisho.
Article horeAgaasimaha Horn Cable oo ka hadlay xiritaanka maanta ee xaruntooda Hargeysa
Article socoda UN: Floods affect over 547,000 people in Somalia